Ungayitshintsha njani iphasiwedi yeakhawunti ye-Gmail | Iindaba zeGajethi
Iphasiwedi ye-Gmail ibaluleke kakhulu. Ukongeza ekuthinteleni abanye abantu ekufikeleleni imiyalezo yethu, ikwathintela ukufikelela kwiakhawunti yethu kaGoogle ngayo. Ke ngoko, kubalulekile ukuba sibe negama eligqithisiweyo kwiakhawunti yethu, ukuze kubenzima ukuba omnye umntu akwazi ukufikelela kuyo.
Ukwenza iiphasiwedi ezinamandla akukho nzima, kodwa kubalulekile ukuba sikwenze. Kuba kumaxesha amaninzi sihlala sisebenzisa iipassword ezifanayo kumaphepha aliqela ngaxeshanye, into enokusenza sengozini. Ke tshintsha iphasiwedi yakho ye-Gmail lukhetho olufanelekileyo lokujonga. Apha sikubonisa ukuba singayenza njani. Ukuze ukwazi ukukhusela iakhawunti yakho ye-imeyile.
Kukho iimeko ezininzi apho sinokutshintsha khona iphasiwedi kwi-Gmail. Inokuba yinto oyigqibileyo, kuba ufuna ukwandisa ukhuseleko lweakhawunti yakho. Kodwa kunokwenzeka ukuba ulibale ipaswedi yakho, ke kwinkqubo yokubuyisela kwimeko yesiqhelo uya kusebenzisa entsha njengendawo ebambeleyo. Sichaza ezi meko zimbini zingezantsi. Kananjalo indlela esinokwenza ngayo iiphasiwedi ezinamandla.
1 Guqula inyathelo lephasiwedi ye-Gmail ngenyathelo
2 Ukuba uyilibele iphasiwedi - Phinda ufumane iphasiwedi
3 Uyenza njani ipassword eyomeleleyo
Guqula inyathelo lephasiwedi ye-Gmail ngenyathelo
Indlela yokuqala yeyona iqhelekileyo, ukuba kuye kufike ixesha xa ufuna tshintsha iphasiwedi ukuphucula ukhuseleko kwiakhawunti yakho ye-Gmail. Amanyathelo ekufuneka elandelwe kule meko awanzima kakhulu. Okokuqala, njengoko unokulindela, kuya kufuneka ungene kwiakhawunti yethu. Ke, siyakuphucula ukhuseleko lwakho, Ukwazi ukuba loluphi usetyenziso olunokufikelela kubalulekile.
Nje ukuba singaphakathi, kuya kufuneka sicofe kwifayile iqhosha le-cogwheel phezulu ekunene kwesikrini. Kanye ngaphezulu kwayo yonke imiyalezo esinayo kwi-inbox. Ngokucofa kwiqhosha, kuya kuvela uluhlu lwezinto onokukhetha kuzo. Uya kubona ukuba enye yazo sisimo sokumisela esinye, ekufuneka sikhe sicofe kuso.
Useto lweakhawunti ye-Gmail luvuleke kwiscreen. Kule meko, kufuneka sijonge kumacandelo aphezulu. Baphuma amacandelo afana nokuBanzi, iilebhile, ukuFunyanwa, njl. Kula macandelo esiwafumanayo, lelo linomdla kuthi Kule meko ziiAkhawunti kunye nokungenisa.
Emva koko singena kweli candelo kwaye siza kubona icandelo lokuqala elivela kwiscreen, esibizwa Guqula iisetingi zeakhawunti. Apho, ukhetho lokuqala olibonisiweyo kuthi yile tshintsha iphasiwedi ye-Gmail, ngoonobumba abluhlaza. Sinqakraza kolu khetho, ukuqhubeka nokutshintsha igama eligqithisiweyo. Uya kucelwa kuqala ukuba ungene kunye negama eligqithisiweyo lwangoku kwiqonga lemeyile.
Uya kusiwa kwiscreen apho kuya kufuneka wenze njalo ngenisa igama lokugqitha elitsha leGmail. Iimfuno ekufuneka ihlangabezane nazo ukuze zithathelwe ingqalelo zikhuselekile zibonisiwe. Kuba kufuneka ubuncinci babalinganiswa abasibhozo. Nje ukuba sibe negama lokugqitha, siyiphinda kwakhona ezantsi kwesikrini kwaye ucofe iqhosha eliluhlaza okwesibhakabhaka emazantsi kwesikrini ukutshintsha iphasiwedi.
Ngala manyathelo, sele uyitshintshile ipassword yakho ye-Gmail. Ayisiyonto epheleleyo, kwaye kulungile ukuyenza amaxesha ngamaxesha, ukuba unokrokra malunga nokhuseleko okanye ucinga ukuba igama eligqithisiweyo alomelelanga ngokwaneleyo. Kuba inkqubo ngokwayo ayinzima ukuyiphumeza.
Ukuba uyilibele iphasiwedi - Phinda ufumane iphasiwedi
Imeko enye enokuthi yenzeke ngamanye amaxesha yile ulibale ipassword yeakhawunti yakho ye-Gmail. Ngethamsanqa, inkonzo yeposi inenkqubo apho sinokufumana ukufikelela kwakhona kwaye ngenxa yoko siya kuba nakho ukutshintsha iphasiwedi ngendlela elula. Kwiskrini sokungena ngemvume, xa singazi iphasiwedi, sijonga isicatshulwa esivela ngezantsi kwebhokisi legama eligqithisiweyo.
Yiyo Umbhalo othi "uyilibele iphasiwedi?". Kuya kufuneka sicofe kuyo, eya kuthi isise kwiscreen ukuqala le nkqubo yokubuyisela kwimeko yesiqhelo, ukuze sikwazi ukufikelela kwiakhawunti kwakhona. Into yokuqala eya kukucela ukuba uyenze ukufaka iphasiwedi yokugqibela oyikhumbulayo usebenzisa kwi-Gmail. Ukuba awukhumbuli namnye kubo, cofa kwindawo ethi "zama enye indlela" emazantsi.
Apha, uya kunikwa ithuba loku thumela ikhowudi yokuqinisekisa kwifowuni yakho ephathekayo. Ngale ndlela, kuya kufuneka singenise ikhowudi kwi-Gmail ukuze sikwazi ukufikelela kwiakhawunti. Lukhetho olukhuselekileyo, kuba kuphela sinokufikelela kule khowudi. Ke ukuba omnye umntu uzama ukungena, umyalezo uza kufika kuthi. I-Gmail ikunika ithuba lokufumana umyalezo okanye umnxeba, ukuze ukhethe ukhetho olunomdla kuwe. Umyalezo ulula.
Xa ufumene umyalezo kwaye ubhale ikhowudi, uya kufumana isikrini apho kuya kufuneka khona yenza iphasiwedi entsha yeGmail. Kwakhona, kufuneka uqiniseke ukuba ligama lokugqitha elomeleleyo. Ke ngoko, kufuneka ubuncinci beempawu ezi-8. Ke, xa uyile kwaye wayifaka kwakhona, uya kuba nakho ukufikelela kwiakhawunti yakho ye-imeyile kwaye utshintshe iphasiwedi ngexesha elinye.
Uyenza njani ipassword eyomeleleyo
Ukwazi indlela yokwenza iiphasiwedi ezinamandla yinto ebaluleke kakhulu kubo bonke abasebenzisi. Ayisiyokuyisebenzisa kwiakhawunti yakho ye-Gmail kuphela, kodwa nakwezinye iiakhawunti ezininzi. Xa usenza igama eligqithisiweyo, kukho izikhokelo ezininzi ezicetyiswa ziingcali zokhuseleko ukuba zithathele ingqalelo ukusebenza ngempumelelo. Imiba ephambili yile:
Kukhethwa ukuba ubuncinci ibe nabalinganiswa abali-12
Sukwenza uhlengahlengiso olucacileyo njengokufaka unobumba u-E kwinombolo 3
Sebenzisa oonobumba abakhulu, oonobumba abancinci, amanani kunye neesimboli
Sukusebenzisa into ekulula ukuyidibanisa nomsebenzisi (imihla yokuzalwa, amagama afanelekileyo okanye osapho, izilwanyana zasekhaya, njl.
Zininzi izinto ekufuneka zithathelwe ingqalelo, kodwa inyani kukuba kukho iqhinga elilula kakhulu elinokusetyenziselwa ukwenza ipassword eyomeleleyo, nokuba yeyokuGmail okanye kwelinye iqonga. Kuya kufuneka uthathe igama ofuna ukulisebenzisa, kwaye kufuneka sazise ezinye iisimboli kunye namanani ngokufanayo. Oku, ukongeza ekulula kakhulu, kunyusa kakhulu ukhuseleko. Okunciphisa amathuba okwehliswa okanye ukubiwa.
Umzekelo, iphasiwedi ligama lokugqitha eliqhelekileyo kubasebenzisi abaninzi. Kodwa ligama lokugqitha elibuthathaka, ngobuqhetseba esikubonise lona, ​​sinokwenza ukuba likhuseleke ngakumbi, ukuze ibe: $ P4s5W0rd% *. Ke, ngaphandle kokuba inde kakhulu, igama lokugqitha linzima ngakumbi kwaye likhuselekile. Kwimeko yeSpain, ungasoloko usebenzisa i Ñ kwiiphasiwedi zakho, njengendlela yokuphucula ukhuseleko lwabo.
Elinye lamagama okugqitha aqhelekileyo kwihlabathi "ngu-123456". Kuqheleke kakhulu, kodwa buthathaka kwaye kuyingozi ukuyisebenzisa kwi-Gmail. Kodwa ukuba siphinda ifomula yangaphambili kwaye sazisa ezinye iisimboli kunye nonobumba Ñ, izinto zitshintsha kakhulu. Kuba iphasiwedi iba ngu: 1% 2 * 3Ñ4 $ 56. Kukhuseleke kakhulu ngalo lonke ixesha. Ke, ngala manyathelo alula, unokwenza ipassword ekhuselekileyo kwiakhawunti yakho ye-imeyile okanye ezinye iiakhawunti.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Tutorials » Ungayitshintsha njani iphasiwedi yakho ye-Gmail
Sanchez eswiti sitsho
Phendula uDulce Sanchez
Uvavanyo lwe-Xiaomi M365 scooter